म सेलिब्रेटी हैन, आइजीपी हुँ ! खराब काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, पात्रो हेरिँदैन::Pathivara News
म सेलिब्रेटी हैन, आइजीपी हुँ ! खराब काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, पात्रो हेरिँदैन
केही वर्षदेखि प्रहरीमा नेतृत्व त थियो, तर कुशको प्रतिमाजस्तै ! प्रहरी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उत्पन्न विवादसँगै पूर्ववर्ती सरकारले चाहेर होइन, बाध्यतामा परेर प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो । तर, उनलाई न तत्कालीन सरकारले पत्यायो, न त प्रहरीभित्र ‘नेतृत्व छ’ भन्ने कुराको अनुभूति नै भयो । फलस्वरुप, डेढ वर्षदेखि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा र भर्नाका प्रक्रियाहरु ठप्पै भए ।
सरकारको प्रतिरक्षाको जिम्मा केपी-माधव नेपालको मात्रै हो ? किन चुक्दैछन नेकपाका नेता ?